चीन पछी मन्त्रीहरु लिएर पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान युएई पुगे
इस्लामावाद : पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान एक दिने भ्रमणका लागि आइतबार संयुक्त अरब इमरेट्स (युएइ) पुगेका छन् । युएइका युवराज तथा सरकारी सेनाका उप सर्वोच्च कमाण्डर शेख मोहमद बिन जायद अल नायेडको निमन्त्रणामा उनी युएई गएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री खानको भ्रमण टोलीमा विदेशमन्त्री, अर्थ मन्त्री, पेट्रोलियम मन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र सल्लाहकारहरु पनि रहेका छन् । युवराजसँगको भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री खानले दुई पक्षीय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मुद्दामा छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानले युएइका प्रधानमन्त्री शेख मोहमद बिन रशिद अल मख्तुमसँग पनि भेटवार्ता गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि खानको यो दोस्रो युएइ भ्रमण हो । यसअघि उनले गत सेप्टेम्बर १९ मा युएइको भ्रमण गरेका थिए ।
२ मंसिर २०७५, आईतवार २०:०५ 18/11/2018 by महेश शर्मा
काभ्रे पनौतीकी किशोरीको दर्दनाक ‘सुसाइड नोट ”हजुरबुबा र बुबाको श्रीमती बनेर बाँच्नुभन्दा मर्नु ठीक लाग्यो” !
यी हुन जापानमा सेक्स स्क्यान्डल भिडियो बाहिरिएका नेपाली जोडी, हेर्नुस तस्बिरमा !
दुबईमा सुनतस्कर गरेर भागेका ठाकुरप्रसाद ढुंगाना संग आईजीपीले के गरे यस्तो !
के भयो निर्मलाका बुवालाई ? यस्तो भन्छन् डाक्टर !
यसै महिना किन्ने भयो ओली सरकारले रेल !